Qiimaha Khudaarta oo Puntland meeshii ugu saraysay gaartay, sababta xiisadda Oromada iyo Soomaalida(dhegayso) – Radio Daljir
Agoosto 11, 2018 11:33 b 0
Xiisadda u dhaxaysa qowmiyadda Oromada iyo Soomaalida Itoobiya ayaa sababtay inuu sare u kac ku yimaado qiimaha qudaarta baradhada, basasha oo ka timaadda dalka Itoobiya, waxaana sidoo kale halkii kiilo ee yaanyo ay gaartay sideedtan kun oo Shilin Soomaali ah, waxaana horay loogu iibsan jiray kiiladii Yaanyada sodon kun oo shilin Soomaali ah.
Arrintan ayaa ganacsatadu u sababaysay qudaartii ka imaan jirtay Itoobiya oo hoos u dhac uu ku yimid, kadib colaaddii ka dhex qaraxday Oromada iyo Soomaalida gobolka Ogaadeeniya.
Puntland ayaa khudaarta ugu badan waxaa ay uga timaadaa Itoobiya iyo Koonfurta Soomaaliya, iyadoona meelaha dhul beereedka ah ee Puntland sida buuraha Galgala ay dadkii deganaa horay uga barakaceen dagaalada Al-shabaab iyo ciidamada difaaca Puntland, halka meelaha qaarkoodna aanay jirin waddo khudaarta si fudud loogu soo gaarsiin karo suuqyada magaalooyinka, iyadoo aan isbadalin, waxaana loo sababaynayaa waddooyinka oo aad u liita.
Haddaba Dadawaynaha Puntland ayaa qaar ka mid ah ka hadlay saamayntan, iyagoo ka qaybgalay barnaamijka Muuqaalka Bulshada ee radiyow Daljir.
Mid kamida Suuqyada Muqdisho oo Albaabada loo laabay